Sratim TV Apk Dhawunirodha Ye Android [Movie App] - Luso Gamer
Sratim TV Apk Dhawunirodha Ye Android [Movie App]
Mazhinji eakasiyana evaraidzo maapplication anowanikwa online. Izvo zvinozivikanwa pakati pevashandisi veandroid asi kana zvasvika kune Ancient Israel People. Ipapo takawana vasina hanya zvachose. Naizvozvo tichitarisa kune avo mafeni, vagadziri vakagadzira Sratim TV.
Zvino kubatanidza iyo Vadivelu Comedy Movie App faira mukati Android smartphone inobvumira vashandisi. Kunakidzwa nekusingaperi Hollywood, Bollywood mamwe evaraidzo indasitiri mafirimu emahara. Zvese zvavanoda kuita kungo dhawunirodha yazvino vhezheni yeApk.
Izvo zvinosvikika kuwana kubva pano nekudzvanya kumwe chete. Rangarira kuti vataridzi vanogona zvakare kuwana matrailer kubva mukati mepuratifomu. Ingo svika papuratifomu yepamhepo uye unakirwe isingaperi premium varaidzo yemahara pasina kunyoreswa.
Chii chinonzi Sratim TV Apk
Sratim TV Android ndeye yepamhepo bato rechitatu rinotsigirwa Android application. Izvo zvinobvumira vashandisi ve smartphone kunakidzwa nekusingaperi Mamuvhi, Series uye TV Shows mahara pasina chero kunyoreswa kana kunyoreswa. Ingoisa iyo Apk vhezheni uye unakirwe isingaperi premium zvemukati.
Pakutanga takagovana zvimwe zvakawanda zvevaraidzo maapplication. Izvo zvakabatana nenyika dzakasiyana uye matunhu. Kusvika panguva ino isu hatikwanise kupupurira kamwe chete application ine chekuita neIsrael. Izvo zvinogona kupa yakananga kuwana kune premium Mafirimu uye Series.
Nekudaro pano isu takabudirira kuunza iyi nyowani online platform. Izvi zvinopa mavhidhiyo ese anosvikika anodaidzwa mumutauro wechiHebheru wechiIsrael. Mavhidhiyo evaraidzo asina kunzi muchiHebheru anogona kunakidzwa nemavhidhiyo nekugonesa zvinyorwa zvidiki.
Izvi hazvireve kuti mamwe mafani ane hukama nedunhu haana hanya zvachose. Ikozvino kuwana chikamu chepasi chekushandisa kuchabatsira mukuturikira chishandiso mumitauro yakasiyana. Ingosarudza mutauro wenyika uye shandura zviri nyore.
zita Sratim TV
zera 1.6 MB
Package Zita il.co.sratim.sratim
Inodiwa Android 4.0.3 uye Uyezve
Kunze kwekupa mukana wakananga kuvaraidzo, chikuva chinopawo ongororo dzakananga uye nhau. Kuwana ongororo kana chikamu chenhau chinopa data razvino. Izvo zvinobatsira vateveri kunzwisisa zviri nyore. Ingosarudza chero ipi zvayo yezvikamu uye nyore kuwana niche-based content.
Tichiri kunakidzwa nemhando yepamusoro yekushandisa, takawana akawanda ezvimwe zvakakosha sarudzo mukati. Idzo dzakakosha sarudzo dzinosanganisira Akapfuma Zvikamu, Tsika Yekutsvagisa Sefa, Inbuilt Vhidhiyo Inoridza, Multilingual Plugin, Speedy Servers, Notification Chiyeuchidzo nezvimwe.
Mumaapplication akawanda akafanana eandroid, hatikwanise kuona iyi plugin yemitauro yakawanda. Chinangwa chekuwedzera plugin ndechekupa online service. Izvi zvinobvumira vateveri kuti vashandure zvirimo mune mimwe mitauro ine nharaunda.
Avo vanoda kuzvibatanidza nechikumbiro zvachose. Iwe unofanirwa kusarudza sarudzo yekunyoresa uye uwane zvirongwa zvazvino uye nhau. Nezve zvakasiyana zvigadziriso pamwe nezvino kurodha mukati meraibhurari.
Iyo webhusaiti shanduro yepuratifomu inowanikwawo online. Nekudaro nhasi pano tinopa iyo mobile vhezheni yevashandisi ve smartphone. Kuti unakirwe neiyo yakafanana premium yemahara zvemukati pane smartphones, isu tinokurudzira vashandisi veandroid kuisa Sratim TV Dhawunirodha.
Izvo zvinosanganisira maMovie, Series uye TV Shows.
Hapana IPTV sarudzo inowanikwa.
Nhau dzichangoburwa uye zvigadziriso zvinosvikika zvakare.
Asi ichaonekwa pachiratidziri kashoma.
Mutauro unogara uripo chiHebheru.
Nzira yekurodha sei Sratim TV App
Kunze uko mawebhusaiti mazhinji anoti anopa akafanana maApk mafaera emahara. Asi muchokwadi, iwo mawebhusaiti ari kupa fake uye akashatiswa mafaera. Saka chii chinofanira kuitwa nevashandisi veandroid mumamiriro ezvinhu akadaro kana vasingakwanisi kuwana yekutanga Apk faira.
Saka wakavhiringika uye hauzive wekuvimba naye anofanira kushanyira webhusaiti yedu. Nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa echokwadi uye epakutanga maApk mafaera. Kuti utore yazvino vhezheni app faira ndapota tinya pane yakapihwa link.
Isu takatoisa iyo faira reapp pane akasiyana ma smartphones uye hatikwanise kupupurira chero dambudziko. Kunyangwe ivo vanogadzira vanodyara akasiyana makiyi maficha kuti iite mushandisi-ane hushamwari. Isa iyo faira reapp pasina kunetsekana nenyaya nekuti yakachengeteka.
Kusvika parizvino isu takaburitsa nekugovana mamwe akasiyana evaraidzo hama maapplication. Izvo zvakakurumbira uye hazvidi kunyoreswa. Kuti unakirwe iwo mamwe emahara premium mapuratifomu ndapota isa anotevera maapplication. Zviri IweCine Apk uye Talk Movies Apk.
Ungave uri weIsrael kana mamwe matunhu ari pedyo. Zvino uyu ndiwo mukana wakanakisa wekuti iwe unakirwe nekusingaperi varaidzo yemahara. Ingo dhawunirodha Sratim TV Apk nekudzvanya imwe sarudzo uye unamate kusingaperi Mafirimu uye Series pasina chero kunyoreswa.
Categories Apps, Entertainment Tags Vadivelu Comedy Movie App, Sratim TV, Sratim TV Apk, Sratim TV app, Vadivelu Comedy Stim TV Download Post navigation
Beamng Drive Apk Dhawunirodha Ye Android [Game]
Master Royale Apk Dhawunirodha Ye Android [Mod Game]